Home / ကိုယ်တိုင်အံ့အားသင့်လောက်မယ့်အရာတွေ ဘဝမှာဘာကြောင့်မလုပ်မိကြတာလဲ?
“Life has no meaning. Each of us has meaning and we bring it to life. It isawaste to be asking the question when you are the answer.” လိုက Joseph Campbell ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။
ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဘာများလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်မိတယ်ဆိုရင် အဖြေက သင်ကိုယ်တိုင်ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုယ်က ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်နေချင်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူရမှာပါ။
ဘဝဆိုတာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုရင် အခန်းဆက်တိုင်းမှာ ဘာများဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုနေရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရေးသားယူရမှာပါ။
ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ခွင့်ရှိတဲ့ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ (ဘေးပတ်ဝန်းကျင် က လူတွေ ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ဖယ်ထားလိုက်ပါဦး။) ကိုယ်တိုင် စိတ်ထဲမှာ ဂုဏ်ယူရလောက်အောင် ဘယ်လို အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်တွေ ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးပြီလဲ?
ကိုယ်ရှင်သန်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝမ်းသာကျေနပ်မှုတွေ အားအင်တွေ ရလာအောင် ဘယ်လောက်များ စွန့်စား ရုန်းကန်လာခဲ့ပြီးပြီလဲ?
အကယ်၍ အခု မေးခွန်းတွေအတွက် သင့်မှာကိုယ်တိုင် စိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ အဖြေ ရေရေရာရာမရှိနေဘူးဆိုရင် သင်ဟာ ကိုယ်တိုင် အံအားသင့်လောက်စရာ ကိစ္စတွေ ဘဝမှာ မလုပ်ခဲ့မိသေးလို့ပါ။ဒါက စိတ်ဓာတ်ကျစရာ ကိစ္စရယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါက ကျွန်တော်တို့ အများစုမှာ ဖြစ်နေတတ်ကြလို့ပါ။ အောင်မြင်တဲ့ လူတွေ မြင်တဲ့အခါ အောင်မြင်ချင်တယ်။ တော်တဲ့လူတွေ တွေ့တဲ့အခါ တော်ချင်တယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေမြင်တဲ့အခါ အားကျတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လို ကျွန်တော်တို့ အင်တိုက်အားတိုက် အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်နိုင်လောက်မယ့် အကြောင်းအရာတွေက ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ဘဝမှာ အများအပြားပါ။
ဆိုတော့ ဘယ်လို အချက်တွေ ကြောင့်လဲ ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
Comfort Zone မှာသာယာနေတတ်သူမျိုးပေါ့။ ကိုယ်က မထူးမခြားနား သာမန် ဘဝမှာပဲ ပျော်မွေ့နေတတ်သူ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို သင်ယူဖို့ နည်းပညာတစ်ခုခု ကို လေ့လာဖို့ ဒါကြီးက ခက်လွန်းတယ် အဆင်ပြေပါ့မလား နောက်မှ လုပ်တာပေါ့ စသည်ဖြင့် excuse ပေါင်းများစွာနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖြေသိမ့်နေတတ်ပြီးတော့ လက်ရှိ အနေအထားကိုပဲ Enough ဖြစ်နေပြီလို့ထင်တယ်။ ဘဝရဲ့ အံသြ ဆန်းသစ်မှုတွေ ဆိုတာ Comfort Zone က ရုန်းထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ စပြီး မြင်ရ ကြုံရတာမျိုးပါ။ ဒီတော့ကိုယ်က ဘဝတလျှောက်လုံး ဒီလို သက်တောင့်သက်သာ နေလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့် မလုပ်မိတာပါလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် သင့်မှာ အဖြေ မလိုတော့ပါဘူး။
ကြီးကြီးမားမား ကျရှုံးဖူးတာမျိုး မရှိဖူးဘူး။
ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် အထိမနာ အကျ မနာဖူးသေးဘူးပေါ့။ ဘဝဆိုတာ ၉၉ ကြိမ်လဲကျတဲ့အခါ ၁၀၀ ကြိမ်မြောက် ပြန်ကြိုးစားခြင်းပါ။ အောင်မြင်မှု အထွဋ်အထိပ်က လူတိုင်း ဟိုးအောက်ခြေကနေ စခဲ့ကြသူချည်းပါပဲ။ ကိုယ်က ဒီလို အားအင်အပြည့်နဲ့ ပြန်လည်ကြိုးစားဖို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိသေးဘူး ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် ကြီးကြီးမားမား ထိထိခိုက်ခိုက် ကျရှုံးထားတာမျိုး မရှိသေးတာ၊ ဒါမှ မဟုတ် ရှိခဲ့တယ်လို့ မခံစားဖူးတာတွေကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။
အခြားသူတွေရဲ့ အမြင်ကို ထည့်တွေးတတ်တယ်။
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေက ဒီလိုကောင်းသော ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှု ပြုလုပ်ရမယ့် နေရာမှာ ထည့်တွက် စရာမလိုတဲ့အချက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဘဝအတွက် တိုးတက်အောင် ပြောင်းလဲမှု တစ်ခု အံသြစရာ တစ်ခု ပြုလုပ်လိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် အချို့လူတွေက ငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်မလဲ ဘယ်လိုများ ဝေဖန်ကြဦးမလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးက အကြီးမားဆုံးသော အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေစေတတ်တာမျိုးပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံလောက်ပြီ Perfect ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်နေတတ်တယ်။
ဒီအချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အများစု လက်သင့်ခံရမယ့် အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ စာသင်ခန်းထဲက သင်ခန်းစာတွေနဲ့ လက်တွေ့ဘဝရဲ့ သင်ခန်းစာတွေဟာ လုံး၀ နီးပါး ကွဲပြားခြားနားနေတာကို မြင်အောင် ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ခံစားသိရှိလိုက်ရရင် ကြိုးစားဖို့ အများကြီး လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခု ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ကျွန်တော်တို့က ဘဝအတွက် တော်နေ တတ်နေပြီလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်နေတာပါပဲ။
ဘဝမှာ Smart ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ထိ လေ့လာထားလဲဆိုတဲ့ အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လို နေထိုင်ပြီး ဘယ်လောက် ရှင်သန် ခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကနေ အကဲဖြတ်ရတာမျိုးပါ။ ဆိုတော့ စာသင်ခန်းထဲက စာမေးပွဲအဖြေလွှာပေါင်းများစွာကို အေးအေးလူလူ ဖြေဆိုအောင်မြင်လာရုံနဲ့ ဘဝက ရပ်တန့်သွားတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ထိ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရင်ဆိုင်နိုင်လဲ ဆိုတာမျိုးနဲ့အတူ ကိုယ် ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ထိရောက်အောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပြီလဲ။ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာမျိုးတွေကို ပြန်တွေးကြည့်ရင်း အမှန်တကယ် Smart ဖြစ်မဖြစ် သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှာကို ကြောက်တတ်တယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အတူတူပါပဲ။ ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲ ခြင်းဆိုတာမျိုးတွေနဲ့တောင် အသားမကျ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ အခါ ကိုယ် စွန့်စားလိုက်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုမှာ ဘာများမှားယွင်းသွားမလဲ ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်နဲ့ Risk မယူ ရဲကြတာက ပြဿနာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ။ ကိုယ်တိုင် ဘာဆိုဘာမှ လက်တွေ့ အကောင်အထည် မဖော်နိုင် မအောင်မြင်နိုင် ခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။
ဘဝကို စူးစမ်းလိုစိတ် နည်းပါးတယ်။
What if ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သင့်အတွက် မဟုတ်သလိုပါပဲ။ ဒါဆို ဒါပဲလို့ လက်ခံလိုက်တယ်။ ဘာမဆို နည်းလမ်း တစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်လို့ လက်ခံထားလိုက်တယ်။ ဒီလို Attitude နဲ့ နေလာတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ကိုယ့်အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ၊ အံ့သြမင်သက်လောက်ရမယ့် အရာတွေ ဘဝမှာ လုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အချိန်ယူ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ရမှာပါ။
အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ တွန့်ဆုတ်တတ်တယ်။
Self-Confidence မရှိတာရယ် ကိုယ့် အရည်အချင်းတွေကို မထုတ်ဖော်ရဲတာရယ် နှစ်မျိုး ပေါင်းလိုက်တော့ ဘဝဟာ ပျင်းရိဖွယ်အတိနဲ့ ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်တန့်နေတော့တာပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြသပြီး အသုံးချဖို့ပါ။ နောက်ဆက်တွဲက ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ပဲ ဖြစ်စေ ဆိုးဝါးတဲ့ ရလဒ်ပဲ ဖြစ်စေ ဒါက ကိုယ်ရဲ့ ပထမ ခြေလှမ်းပါပဲ။ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အတူ ငါ ၁၀ ကြိမ်ကျရှုံးတာမဟုတ်ဘဲ မအောင်မြင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး တွေ့သွားနိုင်လို့ မှတ်ယူရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ အံ့အားသင့်စရာတွေ ဖန်တီးပါ။
ဒီတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေထဲကလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ ဘဝကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဖြတ်သန်းကြီးပြင်းရှင်သန်လာရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းပုံစံ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ ခံယူချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပြောင်းလဲသွားတယ် အနာဂတ်ပန်းတိုင်တွေကို ရိုက်ခတ်လာတယ်။
ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ စာအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို နာရီစက္ကန့်ပေါင်းများစွာ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ပုံဖော်ခွင့်ရနေပြီပဲ။
သင် ကိုယ်တိုင် ဂုဏ်ယူ အံ့အားသင့် ရလောက်မယ့် အရာမျိုးတွေ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ကြိုးစားဖို့ အချိန်တွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတာမို့ အခုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားဗျာ။